Vegetable toppings ukusiza ukwenza isidlo Kulula hhayi kuphela, kodwa futhi esihlwabusayo futhi unempilo. Mhlawumbe yingakho besifazane abaningi kangaka uthando ukupheka amakhekhe okuzenzela isipinashi.
Ukupheka kuyikhono - ngalo owesifazane enza ekhishini elungiselela isidlo angabonisana ngayo uthando nokunakekela emikhaya yazo. Uyashiseka ngempilo yabo, uzama ukukhetha okumnandi nje kuphela, kodwa futhi izindlela ewusizo kakhulu. Ngokwesibonelo, cabangela izinkondlo, amakhekhe ne isipinashi.
Zingaba kulula ukulungiselela, kanye kuphela:
4 izinkomishi ufulawa 60 amagremu ubisi powder, ingxenye eyodwa uwoyela inkomishi yemifino, 25 amagremu ushukela, 1 egg, isipuni of imvubelo elomile, kanye 10-15 amagremu ushukela kanye namanzi kancane yokuzalanisa yabo.
3 idlanzana isipinashi oqoshiwe, 6 amagremu citric acid, isigamu isibani, abanye usawoti, 35 amagremu kawoyela yemifino kanye isipuni Schatten (for the abalandeli).
Ilungiselela amaqebelengwane isipinashi kanje:
Into yokuqala okudingeka ukuba uxove inhlama. Ukuze wenze lokhu, kuzodingeka ukuba ugaye ufulawa kahle ngamafutha, bese ufaka izithako asele.
Ngesikhathi esifanayo in the ingilazi ukuncibilikisa imvubelo, i-bay ngamanzi afudumele noshukela. Ngemva umkhiqizo uzoqala ukusebenza futhi livela Foam aluhlaza, kufanele ukungezwa Imininingwane isisindo futhi isiphetho nomkhombe. Ukuthululela amanzi kancane ukwenza mass obukhulu esilinganisweni.
Roll inhlama ibe ibhola futhi ushiye endaweni efudumele for isigamu sehora.
Ngalesi sikhathi ungenza ukugxusha. Ukuze wenze lokhu, ukuxhuma zonke izingxenye ndawonye kancane obmyat iminwe yabo.
Ngemva ukwanda mass ivolumu, kumele ahlukaniswe kayi, okuvela kulo ke Roll amabhola.
billet ngamunye ekuqaleni cabaza, wafaka phakathi kancane we ukugcwaliswa, bese usonga ifomu unxantathu, ngomusa evala emaphethelweni.
Bhaka amaqebelengwane isipinashi kudingeka bayobhaka kuhovini oshisayo, ukuxubha amafutha abo ebusweni.
Labo ungathandi Fluffy imvubelo ukubhaka, kungase kube ukuhlakanipha ukusebenzisa okunye okukhethwa kukho. Ziyakwazi kungenzeka kube sengathi patties nge isipinashi Puff khekhe.
Ngokuba ukulungiswa imikhiqizo efana uzodinga:
0.5 kilogram of khekhe siphelile 150 amagremu of isipinashi fresh futhi 250 amagremu of ushizi Adighe, isipuni ukhilimu, 1 egg, amalikhi, amanye usawoti isixha oluhlaza onion esibayeni.
Kulokhu, konke iqala ngamadijithi ukugcwaliswa:
Okokuqala, udinga ukuba ugaye yonke imikhiqizo: isipinashi zimfundiso ziba yize futhi zombili izinhlobo anyanisi, uthathe izingcezu ushizi, bese ugcwalisa zonke ukhilimu omuncu basihlikihle kahle.
Ukuze ukugcwaliswa asakazeke futhi ibuthakathaka ngaphezulu, e ingxube udinga ukufaka ngesiswebhu amaqanda qanda.
Unikezele ngezinsizakalo inhlama ibe ungqimba elincanyana, bese uthathe tikwele alinganayo.
Maphakathi ngamunye uxove ukugcwaliswa, bese mpahla emaphethelweni nganoma iyiphi indlela efanelekayo: njengoba onxantathu, ravioli noma izimvilophu.
Ingaphezulu ngamunye semifinished smear isikhuphasha buhlanjululwe ngamanzi.
imikhiqizo Bhaka kufanele kube amaminithi 25 ukuze bayobhaka kuhhavini osuke usushisa kakade ukuba 180 degrees.
Recipe patties nge isipinashi kungaya hhayi kuphela ngohlobo inhlama. Ayikho indima ezingabalulekile kangako udlalwa ukugcwaliswa mkhiqizo. Kunamakhulu izinguqulo ezahlukahlukene Izingxube engasetshenziswa ukulungiswa ophaya. Ngokwesibonelo, abantu abaningi zinambitheke kakhulu eyatholakala ne ukwengeza irayisi. Kufeza indima ezimbili:
Londoloza imifino uma kwenzeka ukuthi akwanele.
Seals ingxube, ekuvimbeleni ke kusukela uwohloka.
Ngokuba ukulungiswa ofakwe enjalo ezikahle esetshenziswa kokwakhiwa okulandelayo:
ugongolo 300 amagremu fresh noma simisiwe isipinashi 1 onion, amagremu 100 irayisi, amaqanda 2 fresh, 50 amagremu of ushizi noma iyiphi kancane oluhlaza (onion, dill noma parsley) kanye pair of wezipuni zamafutha zemifino.
Ilungiselela mass kanje:
Bilisa irayisi, bese uxubha bese uvumele amanzi sokukhipha ngokuphelele.
Anyanisi kancane brown emafutheni, bese ufaka isipinashi oqoshiwe futhi imikhiqizo kancane sikadali ndawonye.
Xhuma kokubili umkhiqizo etholwe.
Ubilise amaqanda, sidilike kanye ne ushizi vukuza bese wengeza mass okuphekiwe.
Faka izithako asele uhlanganise kahle.
Manje ukugcwaliswa usulungile ngokuphelele. Ingasetshenziselwa for yiluphi uhlobo lokuvivinywa. Esimweni ngasinye umphumela muhle kakhulu.
Indlela Yokuthola yemifino isobho puree - lahlotshaniswa nokuba lula futhi ukunambitheka
Indlela ukupheka isikhuphashe okusemathinini
Kuyini ethuneni - definition
"Zolopent", 40 mg: yokusetshenziswa, ukwakheka, analogs